UKUSEBENZA KWEMITHI YESIZULU
February 9, 2015 February 9, 2015 by Dr. Omar Hussein
Ukusebenza kwemithi yesizulu yinto ekade yaba khona futhi esazoba khona nje ngisho nangokuhamba kwesikhathi. Ukusetshenziswa kwmithi yesizulu kusho ukuthi sisabambele emasikweni ethu nasesintwini sethu lapho khona izingqinamba zothando nokunye nje okuthinta impilo zazisonjululwa ngokusetshenziswa kwemithi yesizulu esebenzayo. Ukusebenza komuthi kuye kuncike kuloyo muntu owuzobe ewusebenzisa kanye nalowo muntu owumnikazi womuthi esingathi udokotela.
Imithi iye ihlukane ke kodwa bengingathanda ukuthi ngiqale ngikubhekele le esithi yimithi yothando. Miningi ke ngokwehlukahlukana kwayo futhi awukho phela ongenaso isidingo kwazise izinkinga esinazo azifani neze. Lapha kunemithi ongaysebenzisa uma ngabe usafuna uthando empilweni yakho futhi usafuna ukuthola umuntu ozohlekisana naye. Lomuthi ujwayele ukusetshenziswa kakhulu abantu besilisa kwazise phela yibo abavamise ukulandela abesifazane befuna uthando.
Kodwa ke emva kwalokho kuye kubukeke sengathio kuba abantu besifazane abathwala kanzima bezama ukuqoqa amadoda abo. Lokhu ke kuye kudalwe ukuthi ubona indoda isingusntantanaye ihambe ijaha abanye abantu besfazane phezu kokuthi isinaye umuntu empilweni yayo. Kodwa ke ngemithi yethu siye sikwazi ukuyinqanda indoda ukuze ikwazi ukubheka wena wedwa. Kuye kungabike wukuthi uma ufuna umuthi wokunqanda indoda bese wena uthi ufuna owokuyenza isyoyoyo izwe ngawe. Cha lokho asikugqugquzeli ngoba kushintsha indlela okumele niphilisane ngayo ekhaya.
Kuye kungabi ke eyothando kuphela imithi esiba nayo iba khona nemithi yokuvikela noma ukubethela umuzi wenu. Akuwenzi umqondo noma akukuhle ukuthi nithi nithandana kahle kodwa nihlale ngaphansi kokwesaba yingakho nje sinemithi ekhonela ukusiza esimweni esinjengaleso. Noma ke senifuna izinhlanhla nokuphumelela empilweni sinayo imithi yokwenza lokho futhi iyasebenza nje. Okwakho ukuthi uxhumane nami bese senza izinto zenzeke.
Categories best spells caster, imithi yesintu yothando, love spellsTags imithi, imithi enamandla, imithi yentando esebenzayo, imithi yesizulu, imithi yothando	Post navigation